Top 14 Dragon Ball Z Izinhlamvu ezinamandla — DBZ Store
March 12, 2022 Paul Sin
Top 14 Dragon Ball Z Izinhlamvu ezinamandla
Uma ungumbukeli we-anime, usuvele uyazi ukuthi yini ezayo kulesi sihloko. Njengoba i-shonen ikhona, bekulokhu kunenkulumompikiswano engapheli. Ngaphandle kwesihloko se-anime, sonke sifuna ukwazi: ubani umlingiswa onamandla kakhulu?
I-Dragon Ball ngokungangabazeki ingelinye lama-anime franchise aziwa kakhulu. Ezinye zezinhlamvu ezidume kakhulu zihlanganisa i-Goku, i-Vegeta, ne-Piccolo. Bangabalingiswa abasuse izinkulumompikiswano ezishubile kubalandeli balolu chungechunge. I-anime enezinhlamvu ezinamandla kakhulu nokulandelana kwesenzo okufana nonkulunkulu. Yebo, konke lokhu kumane kusenza sijule engxoxweni yokuthi ubani onamandla kunabo bonke.
Namuhla, sizokhuluma nge-Dragon Ball Z, futhi sizozama ukukala abalingiswa abaqine kakhulu kule sizini yeziqephu ezingama-291.
U-Krillin ungumlingiswa wesibili kanye nomngane wakudala we-Goku. Nakuba amandla akhe aphelele engahlolisiswanga ngokuphelele ngesikhathi se-Dragon Ball Z, u-Krillin wayehlale esebenza njengesithiyo sokuphazamisa abantu ababi ngaphambi kokuba kufike umlingiswa onamandla kunabo bonke. U-Krillin waziwa ngokubamba izitha engaziqondi futhi aziqondise kabi.
Ekulweni namasosha kaFrieza, i-anime isitshela ukuthi amandla ka-Krillin aphikisana nalawo ka-Master Roshi, okumenza abe yingxenye yama-Earthlings anamandla kakhulu ochungechungeni.
Into eyodwa esiyithandayo ngoKrillin ukuthi uyaqonda ukuthi ungumuntu. Njengawo wonke umuntu, unokulinganiselwa okuthile. Noma kunjalo, akakuvumeli lokhu kumthene amandla.
U-Master Roshi uyingxenye yabadlali basemhlabeni abanamandla kakhulu ku-Dragon Ball. Uqeqeshe uGoku, uGohan, uYamcha, noKrillin.
I-scouter ithe izinga lakhe lamandla liku-139. Noma kunjalo, lokhu akunaki amandla akhe angempela. Ukusayina kukaRoshi, okubizwa ngeMax Power, kumvumela ukuthi enze ukuhlasela kwe-ki ngamandla amakhulu. Lokho kuhlasela kunamandla ngokwanele ukucekela phansi ngisho nenyanga.
Ngisho noma engumlingiswa wakudala, ku-Dragon Ball Z, akasitholi isikhathi esingaka sokugqama. Itulo le-Dragon Ball Z liya phambili nabalingiswa abasha, lishiya abanye abafana no-Roshi isikhathi esithile sokuphumula.
Ngokuhamba kwesikhathi, abafundi bakhe bayasibekela. Noma kunjalo, isipiliyoni sakhe seminyaka engama-300 nobuchule bakhe bumenza abe umlingiswa omuhle ochungechungeni. Ngaphandle kwalokho, uyakhanya futhi ku-Dragon Ball Super.
Abalandeli abaningi bamthatha njengomlingiswa ohamba phambili ku-Dragon Ball. Ngeke sibasole! Uwuhlobo lomlingiswa othuthuke kakhulu kunabanye kulo mdlalo. Lapho siqala ukumbona, uyisikhohlakali, futhi kamuva, uba umngane. Lolu shintsho lwamenza intandokazi yabalandeli.
Ungasilahli, uqala ukulahlekelwa imikhuba yakhe ephikisayo ku-Dragon Ball Z njengoba eba umngani noGohan. Ngokuhamba kwesikhathi u-Piccolo uguqukela kumuntu onenhlonipho nodumo. Ngokuhamba kwesikhathi, uba umuntu onobuhle kuye enganakile. Kusenezikhathi lapho ekhombisa khona ukuthi ngaphakathi ukhohlakele futhi unobudlova, kodwa kuyaqondakala: wayengumuntu okhohlakele, futhi kunzima ukushintsha izindlela zakhe zakudala.
Ngaphandle kokungabaza, ungomunye wabantu abagqama kakhulu ku-Dragon Ball. Ngaphandle kokuba yi-Emperor, ungumphikisi omkhulu we-Dragon Ball.
Uyena ocekela phansi iPlanet Vegeta, okumenza abe ngomunye wabaphikisi abesabekayo. Izigilamkhuba ziyafika zihambe, kodwa ulokhu ehlezi phezulu.
Engxenyeni yokuqala yochungechunge, uFrieza unonya futhi uyesabisa, futhi ku-Dragon Ball Z, ulokhu enjalo.
Amandla akhe, kanye nejubane lakhe, limvumela ukuthi enze noma yini ayifunayo. Uhlukumeza uVegeta, ucishe wabulala uGohan, ulimaze kanzima uNail, ubulala uKrillin, futhi uphambukisa uPiccolo ngemuva kokufika efomini lesithathu.
Konke lokhu nokunye okuningi kumenza abe ngomunye wabalingisi abaqine kakhulu emhlabeni we-Dragon Ball.
Le android ingenye yezinto ezidalwe nguDkt. Gero kanye nodadewabo we-Android 17. Ku-Cell Saga, ubhekana ne-Vegeta, futhi okumangazayo nakakhulu, angakwazi ukushaya izingqimba zakhe.
Ngesikhathi sokulwa, uzuza isandla esiphezulu ngesizathu esisodwa esihle: akakwazi ukulahlekelwa amandla okuba i-android. Uma lokho bekungenele, uyena oqeda impi ngesikhathi ephula ingalo kaVegeta.
Ekuqaleni wayengumuntu, futhi njenge-android, wayehlula i-Super Saiyan. Into engcono kakhulu ngaye ihlanganisa amandla angapheli namandla anonya. Ngokuhlangene, kwenza i-Android 18 ibe namandla ngaphandle kwamakhono okuqeqesha.
Uyiwele le-Android 18 futhi uyingxenye yendalo ehlukene kaDkt. Gero. Ku-Cell Saga, sibona i-Android 17 ithatha izinhlamvu ezintathu ngasikhathi sinye: Trunks, Piccolo, kanye ne-Tien. Lokhu kukodwa kwanele ukukhombisa umbukeli ukuthi unamandla kangakanani.
I-Android 17 nayo inamakhono amangalisayo ngenxa yentuthuko eyenziwe uDkt. Gero. Nokho, akazange aqeqeshwe, futhi kubonisa lapho ehlulwa yi-Imperfect Cell. Noma kunjalo, sicabanga ukuthi ubemfanele indawo kulolu hlu kanye nodadewabo.
Bafundi beManga, ngicela ningasicasuki! U-Pikkon ungomunye wabalingisi abavela kuphela ku-anime. Ulwa noGoku empini yokugcina. Unenzuzo kuze kube yilapho iqhawe lethu lithola indawo ebuthakathaka yesu lakhe. Ngisho uGoku uyakuveza lokho U-Pikkon uyisilwi esihle esingenazo izindawo eziyimpumputhe.
Ungomunye wabalingisi abahamba phambili be-Dragon Ball Z abangakhumbuli wonke umuntu. Noma kunjalo, lokho akumenzi abe namandla.
Uyindodana kaSaiyan-Earthling kaBulma kanye neVegeta. Uvela kwenye indawo yonke. Ngaphansi kokuqondisa kuka-Future Gohan, i-Future Trunks iba nekhono eliyingqayizivele.
Uyena kuphela osindayo esikhathini esizayo esihlukile, futhi ngobuhle ubukeka kabi. Ubulala uFrieza, Cell, futhi uvimbela uBuu ukuthi abangele enye inhlekelele.
Abanye bathi ungomunye wabalingiswa ababukelwa phansi kakhulu ku-Dragon Ball Z, futhi abanye baya kude baze basho yonke indawo ezungezile ye-Dragon Ball.
Uyindalo yakamuva yomunye umlingiswa osatshwayo, uDkt. Gero. Yakhiwe ngofuzo lwabalwi abafanelekayo abafana noVegeta, Goku, King Cold, Frieza, kanye noPiccolo. Ngokungafani nokunye okudaliwe, i-Android 17 ne-Android 18, Iseli lingakhuphula amandla ayo ngokumunca amafomu okuphila. Amandla akhe adonsayo angelinye lamandla asatshwa kakhulu, futhi abalingiswa abafana ne-Android 17 kanye ne-18 baba yizisulu. Lokho kuyingxenye yesizathu sokuthi bobabili basohlwini! Iseli lifinyelela ifomu layo Eliphelele ngemva kokuba liwamunce.
Imiphumela ye-Buu enhle lapho u-Innocent Buu ehlukana phakathi kokuhle nokubi kuyilapho esebenzisa ukuhlubuka. UMajin Buu wayevame ukuba mubi ngokuphelele, futhi ngemva kokuthatha i-Southern Supreme Kai, uphenduka uBuu ongenacala. Lapho uMnumzane uSathane emtshela ukuthi akufanele abulale abantu ngokoqobo, uyayeka ukukwenza. Kamuva ucindezela uhlangothi lwakhe olubi.
Naphezu kokuba ngaphansi kwezinye izinhlobo zakhe, abalandeli basabheka u-Good Buu omunye wabadlali abanamandla kakhulu.
Waziwa njengendodana kaChi-Chi noGoku. Yini emenza abe mkhulu kangaka? Ngemva kokuqeda i-Dragon Ball Z, u-Gohan uba iqhawe elinamandla, elingaphezu kwe-Goku futhi ngaphezu kwe-Vegeta. Lokhu kuqinisekiswa ngemuva kokuthi ekwazi ukunqoba kalula u-Super Buu owesabekayo nobulalayo. Le Buu yayiyimbi kakhulu kuzo zonke izinhlobo ze-Majin Buu (mhlawumbe ngaphandle kokumuncwa kwe-Z-Warriors).
Ukuguqulwa kukaGohan kungenye yezinhlelo eziyinhloko ze-Dragon Ball Z, ngemva nje kwe-Cell Saga, lapho u-Goku efa, futhi indodana yakhe kufanele ibe umvikeli woMhlaba omusha. Okungenani kuze kuvele u-Uub.
Uub uvela esaga se-Dragon Ball Z kodwa ufakazela ukuthi ungumuntu wasemhlabeni onamandla kakhulu.
Ngemva nje kokushona kuka-Kid Buu, u-Goku wayefuna ukuqeqeshwa nomuntu okwazi ukulwa, kodwa hhayi ngempela ukusindisa Umhlaba. U-Uub wayenamandla acashile nomusa we-Kid Buu.
Naphezu kokungaqeqeshiwe, sibone u-Uub elwa ngokulinganayo no-Goku. Nakuba u-Goku engabi ngu-Super Saiyan, iqiniso lokuthi u-Uub angalimaza u-Goku ngendlela yakhe evamile ngaphandle kokuqeqeshwa liyancomeka.
Ekugcineni, u-Goku ubona amandla amakhulu ku-Uub futhi esikhundleni sakhe uyamqeqesha.
IVegeta, eyaziwa nangokuthi iNkosana Vegeta yomjaho weSaiyan. IVegeta ingalwa nePerfect Cell nakuba iCell inamandla kakhulu kunaye. I-Vegeta iphinde imelane nokulawula ingqondo ka-Babidi, okubonisa ukuqina kwengqondo.
Nakuba i-Majin Vegeta ne-Super Saiyan 2 Vegeta bengakwazi ukuhambisana ne-Super Buu, i-Vegito (i-Goku fusion) ekugcineni yehlisa omunye wabaphikisi abanamandla ochungechungeni.
Ushintsho lwe-Vegeta njengomuntu onamandla kodwa futhi ukusuka koyisikhohlakali kuya kumngane sibonga ukuxoxwa kwezindaba okuhle kwe-Dragon Ball Z.
I-Goku iyi-Saiyan enamandla kakhulu endaweni yonke, ikakhulukazi ngemva kokuphela kwe-DBZ. Unekhono lemvelo lokulwa, futhi izinzwa zakhe ezibukhali ngesikhathi sempi zimsiza ukuba adlule ezimpini ezinzima kakhulu.
I-Goku iphinde isize ekuthuthukiseni abalingiswa abahlukene kulolu hlu. Ngaphandle kwalokho, ungumlingiswa oyinhloko! I-Goku iyiqhawe elinamandla futhi elilinganiselayo ngempela, elikwazi ukulwa nozwane nozwane nanoma ubani ku-canon ye-DBZ.